Monthly Bonus For August 2020 ? Super Bronze ? Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 1,200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Su Latt (FB-000594) Aye Aye Mar (FB-001065) Lae Shwe Yee (FB-000020) Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 1,000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Su Mon Mon Zaw (FB-000007) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Super Bronze Agent တို့ August လအတွင်း Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 1,200 ကျော် 1,000 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Super Bronze အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 1,200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့အတွက် ?ငွေသား (3) သိန်း (5) သောင်းကျပ်တိတိ Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 1,000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့အတွက် ?ငွေသား (2) သိန်း (3) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For July 2020 ? Super Bronze ? Beaute Cafe အထုပ် 300 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Hnin Wai Soe (FB-000050) Zar Zar Thin (FB-000087) Zin Mar Phyo (FB-001278) Htet Htet Aung (FB-001202) Aye Thida Cho (FB-001996) Tinzar Ohnlwin (FB000041) Saw Oo Khin (FB-001721) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Super Bronze Agent တို့ July လအတွင်း Beaute Cafe အထုပ် 300 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Super Bronze Agent အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (2) သိန်း (5) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 300 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Ni Ni Lwin (FB000604) Khaing Zin Mon (FB000722) Nant Mya Khwar Nyo (FB001445) Shwe Yee Win Shwe (FB000178) Zar Zar Thin (FB000087) Nilar Tin Tun (FB003994) Mary Phi Par Mie (FB001066) Aye Yu Khaing (FB001615) Than Than Moe (FB001711) Yin Mar Lin (FB000686) Chaw Ei Khaing (FB002047) Zuu Zuu Maung (FB001871) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Super Bronze Agent တို့ !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 300 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ?Super Bronze Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (1) သိန်း (3) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 400 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent တွေကတော့ Awaddy Shein (FB000244) Nang Khin (FB000203) Tin Zar Yu (FB000072) Khin Thuzar Kyaw (FB000076) Nan Kay Khine Soe (FB000252) Su Htet Paing (FB001974) Nan Kyawt Khaing (FB000140) Khin Swe Thant (FB001562) Han Ni Htet Htet Oo (FB000701) Kyaing Kyaing Si (FB000086) Yamin Thet Paing (FB004578) Zun Pwint (FB000643) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Super Bronze Agent တို့ !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 400 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ?Super Bronze Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (1) သိန်း (6) သောင်း (5) ထောင် ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Garnier Essence ဘူး 1200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Zin Zin Yu (FB000530) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Zin Zin Yu !!! June လအတွင်း Garnier Essence ဘူး 1200 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Bronze Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (5) သိန်း (3) သောင်းကျပ်တိတိနှင့် ???? Garnier Essence ဘူး (50) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို ဆပ်ပြာတုံး 1200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကေတာ့ Yu May Aung (FB000048) Thet Su Kyi (FB000012) Zu Mon Hlaing (FB000152) Ei Ei Thae Po Khin Saw (FB000014) Ei Ei Phyu (FB000080) Nyo Nyo Mar (FB000719) Thae Thae (FB000004) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Super Bronze Agent တို့ !!! June လအတွင်း ဆပ်ပြာတုံး 1200 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Bronze Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (3) သိန်း (5) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Nano ဘူး 300 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Khaing Myat Oo (FB000052) Wunna Pa Pa Hlaing (FB001196) Zar Zar Thin (FB000087) Thae Thae (FB000004) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Super Bronze Agent တို့ !!! June လအတွင်း ဘူး 300 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Bronze Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ???ငွေသား (2)သိန်း (3)သောင်း ကျပ်တိတိပါ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။